RASMI: Mahrez oo ka mid ah saddexda ciyaaryahan ee ku tartami doona abaal-marinta xiddiga ugu fiican Man City bisha September – Gool FM
RASMI: Mahrez oo ka mid ah saddexda ciyaaryahan ee ku tartami doona abaal-marinta xiddiga ugu fiican Man City bisha September
Dajiye October 2, 2019
(Manchester) 02 Oct 2019. Manchester City ayaa ku shaacisay website-keeda rasmiga ah iyo dhamaan boggageeda baraha bulshada sida Twitter-ka iyo Facebook, magacyada saddexda xiddig u sharaxan inay ku tartamaan abaal-marinta ciyaaryahanka ugu fiican kooxda Manchester City bisha September.
Xiddiga reer Algeria ee Riyad Mahrez ayaa abaal-marintan ciyaaryahanka ugu fiican kooxda Manchester City ee bisha September kula tartami doono xiddigaha Kevin De Bruyne iyo Rodrigo.
Manchester City ayaa ciyaartay 5 kulan bishii hore ee September, oo ay ku jiraan seddex kulan oo horyaalka Premier League ah, hal kulan Carabao Cup ah iyo mid ka mid ah kulamadii furitaanka wareega group-yada ee tartanka Champions League.
Kooxda Pep Guardiola ayaa si layaab leh guuldaro 3-2 ah kala kulantay naadiga Norwich City, kulankii ugu horreeyay ee bishii Sebtember, kahor inta aysan wadada guulaha dib ugu soo laabanin, waxay 3-0 kaga adkaatay Shakhtar Donetsk tartanka Champions League, halka ay Watford ku dhufatay 8-0, sidoo kale kooxda Preston North ayeey kaga adkaadeen 3-0 koobka Carabao Cup, ugu dambeyntii Skay Blues ayaa kaga adkaatay Everton garoonka Goodison Park kulan ka tirsan horyaalka Premier League.
Miyuu Messi soo barbareyn doonaa Rikoorrka Cristiano Ronaldo kulanka caawa ee Inter Milan??
Shaxda rasmiga ah kulanka adag kooxaha Barcelona iyo Inter ee tartanka Champions League